Otuowo Control Barrier, Ehi Panel, Chain Link ngere - Hepeng
anyị merie anyị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ na-esi na elu aha si ahịa anyị site n'ịrapara ugwu na iwu siri ike àgwà akara.
USA ọkọlọtọ nwa oge ngere / Chain njikọ tempora ...
aturu corral ogwe
ịnyịnya ngere panel
Ịkwanyere ntekwasa mgbochi ọrịrị ngere
Ịkwanyere ese Otuowo Control Barrier
Anyị na-dị na Anping County, China, n'ụlọ obodo nke waya ntupu.
Anping Hepeng Hardware netting Co., Ltd. ka aha isi obodo nke 30,1 nde. Anyị ụlọ ọrụ e tọrọ ntọala na ndabere nke Anping County Framei Hardware ntupu Factory nke e hiwere na 1995 na otu onye nke mbụ pụrụ iche manufactures nke ngere netting. Anyị na-dị na Anping County, China, n'ụlọ obodo nke waya ntupu. Anping Hepeng Hardware netting Co., Ltd. bụ ihe ụlọ ọrụ ọkachamara na okporo ụzọ nsu, ụgbọ okporo ígwè nsu, ntigbaa ihuenyo, ọdụ nsu, egwu na-akpọ ala nsu, waya nwere ogwu ntupu nsu, n'ụlọ mkpọrọ nchekwa nsu, welded ntupu nsu, Holland nsu, nche nsu, yinye njikọ nsu, hexagonal waya ntupu ngere ...
New Zealand kpaliri Farm Gate , kpaliri Chain Link ngere , Aluminium Farm Gates, Farm Gate Fence,